I-Pelican's Porch ku-Folly Beach-Oceanview - I-Airbnb
I-Pelican's Porch ku-Folly Beach-Oceanview
Indlu yasogwini enethezekile, ehlotshiswe kahle ekugcineni kwesiqhingi enompheme omkhulu obheke ulwandle. Indlela emfishane yolwandle olunesihlabathi iphuma ngomnyango ongaphambili. Ikhaya linokubukwa okumangalisayo kolwandle kanye neziqongo zomfula eziya ngemuva. Ungabuka kokubili ukuphuma nokushona kwelanga e-Folly Beach ngoba isiqhingi sigijima eMpumalanga/eNtshonalanga. Amabhulokhi angu-9 ukusuka enkabeni yedolobha enempilo, lapho uzothola khona amathilomu, izindawo zokudlela, izitolo, amabha kanye nendawo yokuphumula yasendaweni.
Kukhona ngaphezu kwamamitha-skwele ayi-1000 wendawo yokuhlala esitezi sesibili sendlu yasebhishi yama-1970. Lesi sikhala sihlanganisa ikhishi elihlome ngokuphelele, igumbi lokudlela, igumbi lokuphumula elikhulu elinemibono emihle yoLwandlekazi i-Atlantic kanye nesitezi esikhulu esinetafula lokudlela, izihlalo kanye nezindawo zokuphumula ezibheke olwandle, ngqo ngaphesheya komgwaqo ukusuka endleleni emfushane yolwandle.
Izivakashi zinendawo yokungena yangasese edekhini esitezi sesi-2. Sonke isitezi sesibili esokusetshenziswa kwangasese kwezivakashi. Igumbi lokuhlala lifakwe izinto zakudala, imidwebo emihle namasofa amabili athokomele abheke ulwandle. Igumbi lokudlela linikeza iziqongo zomfula ngemuva kwekhaya. Kunamagumbi okulala ama-2 kanye nezindawo zokugeza eziyi-1.5. Ikhaya elifakwe kahle lilungele abantu abangu-2 kuya kwaba-4. Kukhona umbhede wendlovukazi ekamelweni elikhulu lokulala elinokugeza okuyingxenye okunamathiselwe ohlangothini lolwandle lwekhaya. Igumbi lokulala lesibili linemibhede emibili futhi libheke eceleni komfula wekhaya. Indawo yokupaka izimoto ezimbili inikezwa izivakashi, kanye neshawa yangaphandle nezihlalo zasebhishi.
Azikho izindawo zokuwasha esitezi sesibili, nokho kunelondolo eFolly Beach. Inqwaba yamathawula nazo zonke izinto ezibalulekile zasendlini zinikezwa izivakashi. Indlu ingamabhulokhi ayisishiyagalolunye ukusuka ku-Center Street lapho kunezitolo eziningi ezinempilo, ezisogwini, izindawo zokudlela kanye namabha.
Ngibuze mayelana nokuhlela ukuqasha inqola yegalofu noma ukuqashwa kwamabhayisikili. Siyibhlokhi elilodwa ukusuka e-Sunset Cay Marina emfuleni i-Folly kanye nebhlokhi elilodwa ukusuka e-Folly Beach County Beach Park. Kulabo abafuna indawo ethule futhi bajabulele ukuhamba ngezinyawo okude ogwini, ukufuna igobolondo noma ukuphumula ogwini lolwandle, lena indawo efanelekile. Idolobha laseCharleston elingokomlando liwuhambo lwemoto lwemizuzu engama-20 ukusuka ekhaya. I-Lyft ne-Uber zitholakala kalula.
Ukuphela kwesiqhingi esithule esiseNtshonalanga kuseduze nepaki elihle lesifunda saseFolly Beach okuyindawo yemvelo nendawo enhle yokuhamba ngezinyawo okude. I-Sunset Cay Marina itholakala ngemuva kwendawo eneziqongo zomfula ukusuka kumafasitela abheke ngemuva. I-Center Street ingumgwaqo omkhulu ku-Folly Beach futhi iqhele ngemayela elingu-1 nezindawo zokudlela eziningi, izitolo zasogwini nomculo onomculo ojabulisayo, ojabulisayo. I-Folly Beach inikeza imakethe yendawo ehlanzekile, i-Bert's, isitolo sezinto ezilula, umtapo wolwazi, imakethe yabalimi kanye nomnyango wamaphoyisa kanye nomnyango wezomlilo. Lesi siqhingi singamakhilomitha angu-8 ubude futhi ohlangothini olusempumalanga yesiqhingi kunekhaya le-Morris Island Lighthouse okuyindawo enhle ongachitha kuyo intambama. Lesi yisiqhingi esihle esivimbelayo, cishe amamayela ayi-10 ukusuka eDolobheni lase-Charleston. Uma ufuna indawo ethule, ephumulele yasebhishi, lena indawo elungele wena. Gibela uye edolobheni lomlando, elinempilo laseCharleston nge-Uber noma iLyft, cishe imizuzu engama-20 noma ngaphansi ngemoto. Siyabathanda abangani bethu abavela kude futhi bangakusiza nganoma imiphi imibuzo mayelana nendawo.
Uma abanikazi besedolobheni, sihlala efulethini eliphansi ngokungena kwethu kwangasese. Sinezinja ezimbili eziphumela ngemva kwendlu kusukela endaweni engaphansi. Siyajabula ukukwamukela ukuhlala kwakho nganoma iyiphi indlela esingayenza. Buza nje.
Uma abanikazi besedolobheni, sihlala efulethini eliphansi ngokungena kwethu kwangasese. Sinezinja ezimbili eziphumela ngemva kwendlu kusukela endaweni engaphansi. Siyajabula ukukwa…